Fadhiga Surf ee cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus | Waxaan ka socdaa mac
Applelised | | Noticias, Xanta
Fiidiyowgii ugu dambeeyay ee jilaya Kai Lenny weyn ayaa iskujira laba ka mid ah waxyaabaha aan ugu jeclahay adduunka. Kii ugu dambeeyay Tiknoolajiyada Apple iyo dabaasha. Kuweena Apple jecel waxay u muuqatay utopian inay awoodaan inay la galaan biyaha mid ka mid ah wax soo saarkooda. Ugu horreyntii waa inay caddaataa in iPhone 7 uusan ahayn biyo. Waa taleefan casri ah oo iska caabiya buufiyeyaasha, iyo biyaha laakiin illaa hal dhibic.
Fiidiyowgii ugu dambeeyay Lenny, oo kaashanaysa shirkadda caymiska gadjets-ka teknolojiyada Ganacsiga Square, samee dabaasha imtixaanka moodooyinka ugu dambeeyay ee iPhone. Fiidiyowgu wuxuu ku bilaabmayaa tijaabo 10 daqiiqo ah oo loogu talagalay iPhone 6S, taas oo aysan si fiican u soo bixin. Dhowr quusitaan, leexasho iyo dhaqdhaqaaq ka dib, iPhone 6S ka soo baxa biyaha diyaar u ah wax xoqid.
1 IPhone-ka cusub 7 wuxuu Surfari uga tagayaa Kai Lenny
2 Waxaad u isticmaali lahayd iPhone 7 kamarad ficil ahaan.
IPhone-ka cusub 7 wuxuu Surfari uga tagayaa Kai Lenny
Markii iPhone 6S la burburiyey, isaga ayaa la gaadhay u leexo 6S Plus. Oo sidii la filayay, natiijadu isku mid ayey ahayd. 10 daqiiqo kadib markii la fuulayay fadhiga, iPhone 6S Plus wuxuu ku egyahay sidii walaalkiis ka yar, uu ku haftay. Layaab ma leh maya ?. Waan ognahay in boosteejooyinkan aan loogu talagalin inay biyaha iska caabiyaan, waxbadanna way ka yar yihiin inay ku faafiyaan. Marka xigta, waxay ahayd markii loo baahnaa IPhone cusub 7. Terminalka cusub ee Apple ayaa lagu dhawaaqay inuu yahay mid aan biyuhu xireen Laakiin iska caabbinta biyahaani waxay leedahay nuunisyo cayiman.
Waa marki kuwa cusub. IPhone 7 wuxuu qaadanayaa "qubeys" nus saac ah Kai Lenny. Saddex jeer waqtiga labadii hore. Runtii waa wax xiiso leh oo xiiso leh in la arko sida halka Lenny uu ku dhegan yahay heesaha uu heysto iphone-kiisa. Sameynta qallooca guryaha, iPhone waxay umuuqataa inaysan wax badan ku xanuunsanayn. Muusiggu wuxuu sii wadaa inuu ku ciyaaro xitaa biyaha hoostooda. Ugu dambeyntiina, wareegga iPhone 7 Plus. Sida walaalkiis ka yar, wuxuu u adkaystaa kulan 30 daqiiqo ah Lenny. Laakiin kiiskan waxay umuuqataa in muusiggu istaagayo.
Ku guuleystaha saxda ah ee tijaabada sare wuxuu ahaa iPhone 7. Waxay ku qaadatay nus saac biyaha. Kaliya ma aysan diidin buufinnada. Wuxuu la fuulay mid ka mid ah kuwa waa weyn wuxuuna ku weheliyey dhaqdhaqaaq kasta. Waxaa la quusiyey waqtiyo aan tiro lahayn. Oo intan oo dhan way samaysay iyadoo muusig la garaacayo. Runtii waa yaab. Kuwa jecel isboortiga biyaha fiidiyowgaan wuxuu noqon karaa mid dhiirrigelin badan si ay uga fekeraan iibsashada iPhone.
Waxaad u isticmaali lahayd iPhone 7 kamarad ficil ahaan.
Laakiin IPhone 7 ma yahay ikhtiyaar wanaagsan sida kamaradda waxqabadka?. Way cadahay taas kaamirada la socota iPhone 7-ka cusub Hadda waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa. Qofna shaki kama qabo tayada talaalkiisa. Go'aanku waa mid cajaa'ib leh, oo muuqaalka iyo iftiinka ayaa u qalma kamarad kasta oo xirfad leh. Laakiin halkaa laga bilaabo in loo tixgeliyo ikhtiyaarka loogu talagalay «cam cam» ayaa ah tallaabo muhiim ah.
Fiidiyowga waxaan ku aragnaa sida IPhone-ku uu si fiican ugu dhegan yahay aaladda loo yaqaan 'surfboard'. Laakiin weli waa barroosin dhejis ah oo caag ah. ¿Miyaad ku dhiiran kartaa inaad biyaha la gasho "aaladda 800 euro" iyada oo aan la qaadin tallaabooyin taxaddar dheeraad ah? Tanina ma aha mid ka mid ah cilladaha ugu waaweyn. Kuweena isticmaalay GoPro-ka caanka ah way ogyihiin qalabyada badan ee ka jira isboorti kasta. Iyo dabcan, qalab aad u ballaaran, isla mar ahaantaana jilicsan, uma muuqdo mid wax ku ool ka noqon kara deegaankan.
Marka la soo koobo, runtii waa wax fiican in iPhone uu u xuubsiibanayo dhanka iska caabbinta biyaha. Iyo inaad aragto "gadjet" Apple ah oo mowjadaha fuushan waa mid xiiso leh. Tani ma noqon doontaa tallaabada ugu horreysa ee loo qaado cam cam Apple ah?. Waxay ahayd mid la hubo in si wanaagsan loogu soo dhaweeyay qaybta isboortiga waxqabadka. Apple waxay leedahay teknolojiyad iyo qaabab ay ku sameyso. Laakiin hadda waxaan dejineynaa inaan biyo u dhowaan karno annaga oo aan ka baqeynin taleefannada casriga ah. Dhanka kale, sida Kai Lenny ku leeyahay dhamaadka fiidiyowga: "IPhone 7 waa biyo u adkaysta, laakiin ma leh caddayn biyo".
Ku raaxayso halkan fiidiyowga weyn ee ugu horreeya ee iPhone-ka adduunka ee hareeraha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Fadhiga Surf ee cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus